I-China Customs Union- EAC, GOST-R Service and Testing | I-MCM
-Inyunyana Yamasiko- EAC, GOST-R
Siyini isimemezelo se-GOST-R?
IGOST-R Declaration of Conformity yidokhumende yesimemezelo yokufakazela ukuthi izimpahla ziyalandelwa nemithetho yokuphepha yaseRussia. Ngenkathi i-Law of Product and Certification Service ikhishwa yiRussia Federation ngo-1995, uhlelo oluyimpoqo lokuqinisekiswa kwemikhiqizo lwaqala ukusebenza eRussia. Kudinga ukuthi yonke imikhiqizo edayiswa emakethe yaseRussia iphrintwe ngophawu oluyimpoqo lwesitifiketi se-GOST.
Njengenye yezindlela zokugunyazwa kokuhambisana nesitifiketi, i-Gost-R Declaration of Conformity base kumibiko yokuhlola noma isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi. Ngaphezu kwalokho, i-Declaration of Conformity inesici sokuthi inganikezwa kuphela inhlangano esemthethweni yaseRussia okusho ukuthi ofake isicelo (ophethe) isitifiketi kungaba yinkampani ebhaliswe ngokusemthethweni yaseRussia noma ihhovisi langaphandle elibhalise eRussia.
Uhlobo Lwesimemezelo se-OSTGOST-R kanye nokuqinisekiswa
1. Single Sukuqhuma Certifiketi
Isitifiketi sokuthumela esisodwa sisebenza kuphela kuqoqwana olucacisiwe, umkhiqizo ocacisiwe ochazwe kwinkontileka. Imininingwane ethile ilawulwa ngokuqinile, njengegama lento, ubuningi, imininingwane, inkontileka neklayenti laseRussia.
2. Certificate ngokusebenza kwe unyaka owodwa
Lapho umkhiqizo unikezwe isitifiketi, abakhiqizi bangathumela imikhiqizo eRussia kungakapheli unyaka ongu-1 ngaphandle komkhawulo wezikhathi zokuthunyelwa nobungako kwiklayenti elithile.
3. Certifiketi ngobunyoninco be iminyaka emithathu / emihlanu
Lapho umkhiqizo unikezwe isitifiketi, abakhiqizi bangathumela imikhiqizo eRussia kungakapheli iminyaka emi-3 noma emi-5 ngaphandle komkhawulo wezikhathi zokuthunyelwa nobuningi kwiklayenti elithile.
● I-MCM ineqembu lonjiniyela lokufunda imithethonqubo yakamuva yaseRussia, iqinisekisa ukuthi izindaba zakamuva zesitifiketi se-GOST-R zingabiwa ngokunembile nangesikhathi namakhasimende.
● I-MCM yakha ukubambisana okusondelene nabasendaweni okuyinhlangano yokuqala yezitifiketi esungulwe kakhulu, inikezela ngezinsizakalo ezizinzile nezisebenza kahle zezitifiketi kumakhasimende.
Ngokuvumelana ne Tyena Imigomo ejwayelekile efanelekile kanye nemithetho yemithethonqubo yezobuchwepheshe yaseKazakhstan, Belarus kanye neRussia Federation okuyisivumelwano esisayinwe yiRussia, iBelarus neKazakhstan ngo-Okthoba 18, 2010, iKomidi leCustoms Union lizozinikela ekwakheni imigomo nemfuneko efanayo ukuqinisekisa ukuphepha komkhiqizo. Isitifiketi esisodwa siyasebenza emazweni amathathu, akha isitifiketi seRussia-Belarus-Kazakhstan CU-TR esinophawu olufanayo lwe-EAC. Umthethonqubo uqale ukusebenza kancane kusuka ngoFebhuwari 15th 2013. NgoJanuwari 2015, i-Armenia neKyrgyzstan bajoyina i-Customs Union.
Uhlobo lweSitifiketi se-▍CU-TR nokuqinisekiswa
Single Sukuqhuma Certifiketi
Isitifiketi sokuthumela esisodwa sisebenza kuphela kuqoqwana olucacisiwe, umkhiqizo ocacisiwe ochazwe kwinkontileka. Imininingwane ethile ilawulwa ngokuqinile, njengegama lento, ubuningi, inkontileka yokucaciswa neklayenti laseRussia. Lapho ufaka isicelo sesitifiketi, akukho masampula acelwa ukuthi anikele kepha kudingeka imibhalo nolwazi.
Certifiketi nge ukuba semthethweni ye unyaka owodwa
Lapho umkhiqizo unikezwe isitifiketi, abakhiqizi bangathumela imikhiqizo eRussia kungakapheli unyaka ongu-1 ngaphandle komkhawulo wezikhathi zokuthunyelwa kanye nobuningi.
Isitifiketi esisebenza ngokusemthethweni se- ezintathu unyakas
Lapho umkhiqizo unikezwe isitifiketi, abakhiqizi bangathumela imikhiqizo eRussia kungakapheli iminyaka emithathu ngaphandle komkhawulo wezikhathi zokuthunyelwa kanye nenani.
Isitifiketi sokusebenza kweminyaka emihlanu
Lapho umkhiqizo unikezwe isitifiketi, abakhiqizi bangathumela imikhiqizo eRussia kungakapheli iminyaka engu-5 ngaphandle komkhawulo wezikhathi zokuthunyelwa kanye nenani.
● I-MCM ineqembu lonjiniyela abangochwepheshe lokufunda imithethonqubo yesitifiketi sakamuva yabasebenzi, nokuhlinzeka ngemisebenzi yokulandelela yamaphrojekthi aseduze, ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wamakhasimende ungena esifundeni ngokushelela nangempumelelo.
● Izinsizakusebenza eziningi eziqoqwe ngomkhakha webhethri zenza i-MCM ikwazi ukuhlinzeka insizakalo esebenza kahle futhi engabizi kakhulu kumakhasimende.
● I-MCM yakha ukubambisana okusondelene nezinhlangano ezifanele zasendaweni, iqinisekisa ukuthi ukwaziswa kwamuva kwesitifiketi se-CU-TR kwabelwana ngakho ngokunembile nangesikhathi namakhasimende
Olandelayo: Melika, Canada- cTUVus & ETL
Isitifiketi se-Gost R
Intengo Yezitifiketi ze-Gost R
Inqubo Yesitifiketi se-Gost R
Insizakalo Yezitifiketi ze-Gost R
Gost R Isikhathi Sokuhola
I-Got R Quotation
Umbiko Gost R
Isidingo se-Gost R
Ukucaciswa kwe-Gost R
Gost R Imibhalo Yezobuchwepheshe
Gost R Imfuneko Yezobuchwepheshe
Ukuhlolwa kwe-Gost R
Izinto ze-Gost R Test
Indlela Yokuhlola ye-Gost R
Gost R Umbiko Wokuhlola
I-Gost R Lab Yokuhlola
I-Gost R Yokuhlola Ilebhu
Intengo Yokuhlola ye-Gost R
Isevisi Yokuhlola ye-Gost R
Isikhathi sokuhlolwa se-Gost R
Ngilahlekile R Tr